Russian Aeroflot and S7 airlines receive permits to operate flights to Germany | Airline News
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeenqwelo moya » I-Russian Aeroflot kunye neenqwelomoya ze-S7 zifumana amaphepha-mvume okusebenza ngenqwelomoya eJamani
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuhamba zaseYurophu • Iindaba zaseJamani • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Russia iindaba zokuhamba • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
I-Russian Aeroflot kunye neenqwelomoya ze-S7 zifumana amaphepha-mvume okusebenza ngenqwelomoya eJamani
Ngaphambili, iinqwelomoya zaseRashiya naseJamani zazifumana ubunzima ekufumaneni iimvume zokubhabha phakathi kwamazwe kwaye kuye kwafuneka ukuba zirhoxise iinqwelomoya.
I-Aeroflot ifumana amaphepha-mvume kubasemagunyeni kwezokundiza eJamani
I-S7 Airlines nayo ifumene zonke iimvume eziyimfuneko
ILufthansa ibhengeze ukuba ifumene zonke iimvume eziyimfuneko kwiinqwelomoya zaseRashiya
Umphathi omkhulu weqela laseRussia iAeroflot Group uthe iAeroflot ifumene imvume kubasemagunyeni beenqwelo moya baseJamani ukuba basebenze ngeenqwelo moya phakathi kweRussian Federation kunye neFederal Republic yaseJamani.
Yonke into ihamba kakuhle, siyifumene imvume, ” Aeroflot UyiNtloko yoLawulo, wongeza ukuba ichaphazela malunga neenqwelo moya ezingama-28 ngeveki njengenxalenye yethayimthebhile yasehlotyeni.
Ngeli xesha inkonzo yeendaba yesiphatho sesibini ngobukhulu eRashiya, i S7 Airlines, yathi nenkampani yezindiza ifumene zonke iimvume eziyimfuneko.
“I-S7 Airlines ifumene imvume kwabasemagunyeni baseJamani yokusebenzisa iinqwelomoya. Iinqwelomoya eziya eJamani ziya kusebenza njengoko bekucwangcisiwe, ”yazisa iS7.
Ngaphambili Lufthansa ibhengeze ukuba ifumene zonke iimvume eziyimfuneko eRussia ngenqwelomoya ezivela kumagunya eenqwelomoya zaseRussia.
Ngaphambili, iinqwelomoya zaseRashiya naseJamani zazifumana ubunzima ekufumaneni iimvume zokubhabha phakathi kwamazwe. Abaphetheyo kwafuneka bacime iinqwelomoya.
Ngokwamagosa aseJamani, ingxaki inxulumene nenyaniso yokuba i-Arhente yoMkhosi Wezothutho Womoya waseRussia khange ayinike kwangexesha imvume yeenqwelo moya zeenkampani zaseJamani ngoJuni. Ngesiseko sokuphindisela, abasemagunyeni kwezokundwendwela baseJamani abavumanga ukubaleka kweenkampani zaseRussia.